Posted: Onkoloolessa/October 15, 2011 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (5)
Karaa biraatiin yoo ilaalame garuu, waan hir’ate ykn hanqate dubbachuu qofaa otuu hin taane, waan hanga har’aatti dalagametti gammaduu fi ittiin boonuus qabna. Erga qubeen hojiirra ooltee kaasee tattaaffiilee nama boonsisantu godhamaa jiru. Afaan Oromoo naannoo Oromiyaatti bakkee Afaan Amaaraa bu’ee; mana barnootaa sadarkaa duraa (elementary school) irraa jalqabee hanga sadarkaa ol aanaatti Afaan Oromootiin (qubee dhaan) kennamaa jira. Digirii ol aanaanillee (Ph.D.) Afaan keenyaan qubee dhaan barreeffamaa jira. Mootummaa uummata Oromootiif hin dhaabbanne, mootummaa sobaa (fake government) ta’ullee, mootummaa Oromiyaa kan ofiin jedhu kunis qubeetti fayyadamee ittiin hojjechaa jira. Akka meeshaatti itti fayyadamee kanaan nu miidhaa jirus, diinnillee qubee fi Afaan keenya baratee; kanaan Oromoo of fakkeessee uummata keenyarratti shira xaxaa jira. Kuni hunduu sadarkaa qubeen har’a irra geesse ykn jirtu agarsiisu jechuu dha.
Qabsoon bilisummaa keenyaa bu’aa bayii meeqa keessa dabree as ga’ullee, har’as sana keessaa ba’uu dadhabee; kunoo qormaata guddaa keessa jira. Dhibdeen ykn waldhabbiin qabsoo kana keessatti uumames hidda baasee cimaa dhufe malee, wanti fooyya’e hin jiru. Kun dhugaa eenyyuu jalaa hin dhokannee dha. Sababni guddaan waldhabbii ammoo, ilaalcha siyaasaa fi adeemsa qabsoo kanaa akka ta’un amana. Sababooleen biroo, kan qabsaa’ota Oromoo walittibuusan jiraatanillee, kan mooraa QBO keessatti dhibdee guddaa uume ilaalcha siyaasaa ti jechuu kooti. Isa kanatu har’allee akka waliigalteen hin uumamne taasisa. Isa kanatu amala qabsaa’otaallee jijjiiree; rakkoon akkanaas aadaa akka ta’u godhe. Asirratti aadaa yoon jedhu, aadaa Oromoo bareedaa fi boonsisaa gaafii keessa galchuu otuu hin taane, aadaa oftuulummaa, aadaa anatu si caalaa beekaa, aadaa kiyyatu caalaa isa kana wayyaa, … jechuun barbaade.
• Tokkoffaa, injifatnoolee hanga har’aatti arganne fi harka keenyatti galfanne kana jabinaa fi ciminaan eeggachuu ykn tikfachuu dha. Injofatnoolee kana keessa inni guddaan tokko, Oromiyaa dhiiga ilmaan Oromootiin ijaaramte tana, xinaatee yoo xinnaate akka amma jirtu kanatti tikfachuu dha. Afaan keenya akka guddatu fi waalta’u; akkasumas aadaan keenya akka babal’atu fi guddatu godhuu dha.
• Lammaffaa, diina nama-nyaataa, Wayyaanee faashistii kana hundee isaa wajjin buqqisanii achi darbuu dhaan; uummata keenya gabrummaa yoomiyyuu caalaa hamaa ta’e kana keessaa baasanii; dhiibbaa alaa tokko malee hiree ofii ofiin murteeffachuu akka danda’u taasisuu dha. Biyya isaa Oromiyaarratti abbaa biyyaa fi abbaa qabeenya isaa akka ta’u qabsoo bilisummaa isaa kana galii hawwameen ga’uu dha.
Biyya keessattis ta’ee biyya alaatti, hunda caalaa, hundeen waliigaltee fi tokkummaa Oromummaa dhaaf dursa kennuu dha. Akkuman yeroo tokko barruu kiyya keessatti http://gadaa.com/oduu/3228/2010/04/08/oromummaan-kan-walii-fi-dura-dhufu-yoo-ta%e2%80%99u-amantiin-garuu-kan-dhuunfaa-fi-booda-dhufu-dha/ ibsuu yaale, Oromummaan kan walii (kan hunda keenyaa) waan ta’eef, kun eenyummaa keenya dha. Eenyummaa keenyatti amannee (amanuu qabnas) isa kanaaf yoo dursa kennine, garaagarummaan nu jidduu jirullee dhiphachaa deema. Oromummaan eenyummaa, aadaa fi seenaa keenya. Isa kanatu walitti nu fida; isa kanatu walitti nu qaba; isa kanatu dhimma walii ti. Namootni dhimma tokko waliin qaban ammoo, akka waliigaltee uuman taasisa. Waliigalteen bu’ura tokkummaa ti. Tokkummaan humna; humni cimaan injifatnoo fida; injifatnoon ammoo galii hawwametti nama geessa.
Oct 16, 11 at 5:04 am
akkuma yeroo kaan, waan dansaa barreesite! Galatoomi, Rabbi si haa eebbisu, jabaadhu!!
Oct 16, 11 at 6:51 pm
Hi Abdii Boruu,
Yaada gaari fide. Dhuma irratti inuma waliin hojatu. Ani wanta sammu kiyya keessa dedebi’u kaasa. Biyya faranjii kanatti baay’ina hin qabnu. Humni keenya xiqqaadha. Yeroo kana sagalee oromoo gareen adda addaaa itti fayadamaa jiran maalif gara sagalee jabaa tokkotti hin jijjiramne???. Maalaqa ummataa “abuse” gochuudha bar. QBOtif sagaleen tokko gahaadha. Kan Shanee Gumii fayadamtu qofaa hanbisani kaan cufuudha. Namoota (Journalist) kutaalee oromiyaa adda addaa keeessa itti dabalani akka bilisa (liberal) ta’ani hojatan. Waanuma QBO jabeesaani irratti hojatu. Gurmuu siyaasa hin hafarsan. Namoota qabsoo keenya hoganaa turan, hoganaa jiran kkf hundu yaada isaani itti kennan oso ta’e gaaridha. Akkuma “Media” biyya faranjii jechaafan. “Public-property”gochuu. “Media” kan ummataa ta’u qaba. Sochiidhuma QBO jabeessu danda’ani irratti xiyyefatani hojatu. Hundatu “financial support” barbaachsiu kenna kan ummataa taanan. Jaarsi biyyaa garee hundaattu dubatani hojii irra akka oolu hojachuudha. Sagaleedhuma tokko seeran jabessu wayya. Yoo akkana ta’e hundu dhageefachuu fedha.
Oct 18, 11 at 4:22 am
First of all, I would like to thank Obbo Abdii Boruu for this nice article and generally for his tireless effort to write about our cause. Please keep up your good job.
Please, please can somebody tell me where and how I can get afaan oromoo grammar book(s) written, of course, in qubee afaan oromoo? I have been looking for such books for a long time but still without success.
If someone knows about this or has any useful idea, please send me your info to boontuus@gmail.com.
Nov 4, 11 at 12:45 pm
I think Oromo liberation is inevitable and the possible future three types of sovereignty are not as such disadvantageous for Oromia; we can just relax and choose one of them:
– the Hindi style: the Hindi people liberated all nations and nationalities in their region and named the whole country as India, made the Hindi language as the working language of the Indian federation and of course divided the national area of Hindi into multiple federal regions. Why not we, the Oromo people, liberate the whole nations and nationalities in the Ethiopian empire, call the whole country Oromia and promote Afaan Oromo to the working language of the federation replacing Amharinyaa, with the five Odaa’s of Oromia being separate federal regions?
– the English style: the English people liberated themselves from the 700 years rule of the Roman empire, forged England as an autonomous region and united it with the neighbouring others to form the british United Kingdom, they also made English language the working language of the Kingdom. Can’t Oromia being autonomous, free and independent from the alien forces be united with the neighbour autonomous regions to forge the Cushitic Ethiopian union, similar to that of the United Kingdom and make Afaan Oromo the working language of the union replacing Amharinyaa?
– the Ruski style: Russians dismantled the Soviet union and established the Russian federation, which uses Russian national language, the federation which still does have an influence on its neighbours, because of its economic and military strength. Does this way of dismantling the Ethiopian empire and fostering Gadaa republic of Oromia to have a further influence over the liberated neighbouring countries more advantageous than the first two types of sovereignty?
Nov 25, 11 at 2:00 am
Galata guddaa qabda Obbo Abdii Boruu!